आज इपीजीले दिल्लीमा सन् १९५०को सन्धिबारे छलफल गर्दै – YesKathmandu.com
काठमाडौं । नेपाल –भारत प्रबुद्ध समूह(इपीजी) को दोस्रो बैंठक आज (मंगलबार)बाट नयाँदिल्लीमा सुरु भएको छ ।
इपीजी को बैंठकमा सन् १९५० मा भएको नेपाल– भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनलगायत अन्य सन्धि बारेमा छलफल हँुने भएको छ । प्रबुद्ध समूहको बैंठकमा नेपाल तर्फका सदस्यहरु कूटनीतिज्ञ डा. भेषबहादुर थापा, एमाले सांसद राजन भट्टराई, कानुनविद सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वमन्त्री निलाम्बर आचार्य सहभागी भएका छन् । भने बैंठकमा भारतका तर्फबाट पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी. लामा, र भुवनचन्द्र उप्रेतीले सहभागीता जनाएका छन् ।
प्रबुद्ध समूहको बैंठकमा नेपालले हस्ताक्षरसहित‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ बुँदाबारे छलफल गर्ने नेपालतर्फका ईपीजी सदस्य निलम्बर आचार्यले जानकारी गराएका छन् । भने, भारतीय पक्षले पारवहन सन्धिको पुनरावलोकनको विषयमा छलफल गर्ने तयारीमा रहेको भारतीय इपीजीका समूह सदस्य विसी उप्रेतीले बताएका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकिय भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत (इपीजी) प्रबुद्ध समूहको गठन भएसँगै पहिलो बैंठक जुलाईमा काठमाडौंमा गरिएको थियो ।
राष्ट्रपतिका लागि एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको उमेद्वारी दर्ता
डलर भन्दै कागज देखाएर १३ लाख रुपियाँ ठगी
नयाँ मन्त्रीहरुले बिहिबार चारबजे सपथ ग्रहण गर्ने
उपत्याकामा तीस वटा साझा बस थप्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन